Tsy tsara ho azy izay manaboka ny hafa… | NewsMada
Tsy tsara ho azy izay manaboka ny hafa…
Amin’ny varotra, azo atao ny mandoka ny entam-barotry ny tena fa tsy mety ny manaboka ny an’ny hafa. Amin’ny fifidianana toy izao, karazana “entam-barotra” ny mpirotsa-kofidina: aseho vahoaka, anaovana dokam-barotra, amidy…
Amin’izany, misy ny tsy matoky tena na amin’izay lazainy? Na vinam-pirahamonina io, na fandaharanasa, na fomba fiasana… Mety tsy matoky tena amin’izany ny sasany, na matahotra fadiranovana ny mpifaninana aminy hahomby.
Eo ny raharaha: misy tsy milaza mazava izay tena hataony raha tonga eo amin’ny fitantanana ny Tanàna, ohatra, izy amin’izao fifidianana kaominaly izao. Ny manabokaboka ny hafa no be ao an-tsainy sy lazainy. Nahoana loatra?
Tsy ny hahazoany fandresena amin’ny fandresen-dahatra ny mpifidy amin’ny fandaharanasa aroso no imasoan’ny sasany amin’izany, fa ny tsy hahalany izay heveriny ho manelingelina azy, sarotra resena, ampoizina ho voafidy…
Vokany, alaim-panahy ny mpanao tombantombana fa efa nisy amin’ireo mpirotsa-kofidina manao izany fihetsika sy fiady izany no efa fanta-bahoaka amin’ny ataony sy ny fiasany: efa teo amin’ny fitondrana aza, fa tsy hita izay vitany.
Anisan’ny fositra amin’ny fifidianana ny tsy fisisihana amin’izay handresen’ny tena, fa ny manao izay handavoana ny hafa noho ny tsy fahazakana fifaninanana. Dia mipoipoitra ny karazana fitsikerana, fanaratsiana, fanakiviana…
Ho tonga hatraiza ny mpirotsa-kofidina toy izany? Manakorontana sy manapotika izay manelingelina azy… Nefa fampandrosoana ny Tanàna iaraha-miaina sy iaraha-manana no hoe hatao, fanatsarana ny fiainan’ny mponina ao aminy.
Tsy ny fandresen-dahatra ny mpifidy hiara-miisalahy amin’ny fampandrosoana ny Tanàna ve no zava-dehibe sy mahamaika, fa izay hahazoana toerana fotsiny? Anjaran’ny mpifidy ny mandinika, mandanjalanja, mampitaha, misafidy…
Ny fanabokana ny hafa tsy midika hoe tsara ho azy amin’izao ny tena, fa izay fanobakana ny hafa izay aza dia efa faharatsiana. Misy ny mpirotsa-kofidina tena vonona, sahy, resy lahatra amin’izay lazainy sy hataony… Ny tena no misafidy.